Malunga nathi -Zhejiang THOR Electric Co., Ltd.
I-Thor imalunga nokukhusela ngokuchasene neziphumo ezibi zamandla okudlula. Yinjongo yethu kunye nomsebenzi wethu wokudibanisa imiceli mngeni yabathengi kunye nomgangatho ophezulu, isisombululo esinexabiso elifanelekileyo kunye neemveliso-ezigqitywe yinkonzo yabathengi engenakuthelekiswa nanto kunye nenkxaso yezobuchwephesha.
Idityaniswe kwi2006, Imbuyekezo Thor Electric Co., Ltd. I-Thhor ilandela imigangatho yenkqubo esemgangathweni yamazwe aphesheya, i-ISO 9001 iqinisekisiwe kwaye imigangatho yethu yobugcisa ihambelana ne-GB18802.1-2011 / IEC61643.1. Iindidi kunye neeklasi zombane wethu kunye nokubanjwa okungaphezulu kwe-20KA ~ 200KA (8 / 20μS) kunye ne-15KA ~ 50KA (10 / 350μS) kuvavanywa kwaye kugqitywe zonke iimfuno ngokusekwe kwiklasi yabo. 2006. Ukuzibophelela okuqhubekayo kukaThor ekuthobeleni iRoHS kubandakanya ukuqhubeka kwemizamo yokunciphisa ubukho bezinto ezinobungozi kuyilo nasekwenzeni inani elandayo leemveliso ezithandwayo.
Zhejiang Thor Electric Co., Ltd.uzibophelele ekufezekiseni iimfuno zomyalelo we-EU we-Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Lo myalelo ufuna ukuba abavelisi bezixhobo zombane kunye neze-elektroniki baxhase ukubuyiselwa kwazo ukuze zisetyenziswe ngokutsha okanye ziphinde zisetyenziswe kwakhona iimveliso zazo ezibekwe kwintengiso ye-EU emva konyaka ka-2005.